खरबुजाका फाईदा र बेफाईदा,कस्तो ब्यक्तिले खानुहुदैन् ? थाहा पाउनुहोस् । | NepalDut
खरबुजाका फाईदा र बेफाईदा,कस्तो ब्यक्तिले खानुहुदैन् ? थाहा पाउनुहोस् ।
खरबुजा एउटा यस्तो फल हो जसमा पानीको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले गर्मीमा यसको सेवनले शरीरमा पानीको कमी हुन दिँदैन भने शरीर विशेषगरी पेटलाई चिसो बनाइराख्छ । खरबुजा खानु विभिन्न रोगका लागि फाइदाजनक पनि मानिन्छ ।
खरबुजा तौल घटाउन पनि निकै सहयोगी हुन्छ तर यो केही निश्चित रोगीले खानु हुँदैन । खरबुजा खाँदा कस्ता फाइदा हुन्छन् र यो कुन रोग लागेका व्यक्तिले खानु हुँदैन, यसबारे जानकारी लिऔं ।
तौल घटाउन फाइदाजनकः
प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउँछ र आँखाका लागि पनि फाइदाजनकः
दिमाग शान्त बनाउँछः
उच्च रक्तचाप भएकालाईः
यी व्यक्तिले नखाने खरबुजाः
– दम र एलर्जीको समस्या भएका व्यक्तिले खरबुजा खानु हुँदैन । यो चिसो हुन्छ र यसले सास नलीमा सुन्निने गर्छ ।
– भात वा दही खाने बित्तिकै खरबुजा खानु हुँदैन ।
– खाली पेटमा पनि खरबुजा खानु हुँदैन । खाली पेटमा खरबुजा खाँदा बान्ता हुने वा पेटको अन्य समस्याको कारण बन्न सक्छ ।
– खरबुजा खाने बित्तिकै पानी नपिउनुहोस् । तुरुन्त पानी पिउँदा बानी हुनसक्छ ।
– राती सुत्नेबेला पनि खरबुजा खानुहुँदैन किनभने यसले कफ बढाउन सक्छ ।